Edisiona KS OmniScriptum - Boky maneran-tany
KS OmniScriptum Editions
Fandinihana ny seramika talohan'ny Hispanika avy any Pereira, Kolombia
Novambra 25, 2021 ny Carlos Andrés Jiménez U./Melisa Vargas G.
Aiza no hividianana ny boky Fianarana momba ny seramika prehispanic avy any Pereira, Kolombia? Inona no atao hoe Fianarana momba ny Ceramic Pre-Hispanic avy any Pereira, Kolombia? Ny tanimanga talohan'ny Hispanika amin'ny arkeolojia dia natao ho an'ny fianarana izay misy lohahevitra fikarohana marobe sy isan-karazany, toy ny endrika, fomba, haingon-trano, sns. Misaotra ny… hamaky bebe kokoa
Sokajy boky Tags KS OmniScriptum Editions Leave a comment
Rafitra ny fampitoviana sy ny tsy fitoviana, ny matrices ary ny famaritana
Jolay 14, 2021 ny Giovanni Alcocer
Aiza no misy ny boky Systems of Equations and Inequalities, Matrices and Determinants? Inona no atao hoe Systems of Equations and Inequalities, Matrices and Determinants? Ity boky ity dia natao ho torolalana fototra sy tena ilaina amin'ny rafitra tsipika sy tsy andalana momba ny fitoviana sy ny tsy fitoviana, ny matrices ary ny determinants. Izy io dia mirakitra ny lohahevitra manaraka: rafitra fampitoviana… hamaky bebe kokoa
Ny fahaiza-manao amin'ny fampianarana maoderina sa taloha?
Jolay 4, 2021 ny Carlos Alberto Jaramillo Pechene / Leída E. Quinteros R.
Aiza no hividianana ny boky Competences for a Modern or Ancient Education? Momba ny inona ilay boky Competences for a Modern or Ancient Education? Ny oniversite sasany manerana ny planeta dia mbola mihevitra fa ny olona manampy amin'ny fananganana hevitra amin'ny asany dia tokony hameno azy ireo fahaiza-manao, nahita oniversite aho izay mihoatra ny fahaiza-manao sasany ... hamaky bebe kokoa
Rafitra fitantanana kalitao ao amin'ny biraon'ny Pharmacy Espaniola
Jolay 4, 2021 ny Jonathan Garcia Cairos
Aiza no ahitana ny boky Rafitra fitantanana kalitao ao amin'ny biraon'ny Pharmacy espaniola? Inona no atao hoe Rafitra fitantanana kalitao ao amin'ny biraon'ny Pharmacy Espaniola? Ny rafi-pitantanana kalitao dia ambonin'ny vokatry ny hetsika iarahan'ny orinasa na fikambanana… hamaky bebe kokoa
Avy amin'ny fako mankany amin'ny laboratoara
Jolay 2, 2021 ny Wilmer Nicolas Mogollón Vargas / Sergio Andres Moreno A
Aiza no hividianana ny boky Avy amin'ny fako mankany amin'ny laboratoara? Inona no atao hoe boky Avy amin'ny fako mankany amin'ny laboratoara? Avy amin'ny sisa tavela amin'ny laboratoara dia fikarohana akademika mifototra amin'ny maodely fomba fiasa ara-tsiansa, natao tamin'ny tanjon'ny fahatakarana ara-mekanika ny fihetsiky ny polyethylene sy ny fibre voajanahary voajanahary (sisal). Taorian'ny famokarana... hamaky bebe kokoa
Rafitra fisoratana anarana amin'ny toxicology & poisons
Jolay 1, 2021 ny Maria Leonor Carolina Aleman Ortega / Carolina Martinez A
Aiza no misy ny boky Rafitra fisoratana anarana amin'ny toxicology & poison? Inona no atao hoe rafitra fisoratana anarana amin'ny toxicology & poison? Nanomboka tamin'ny XNUMX, tamin'ny Desambra, ny CITVER (Veracruz Health Services Toxicological Information Center) dia noforonina, voatanisa ao amin'ny lisitry ny foibe sy andrim-panjakana… hamaky bebe kokoa
Paikady didactic ho loharanom-pampianarana amin'ny siansa voajanahary
Jolay 1, 2021 ny Elvira Patricia Florez Nisperuza / Pedro A. Ramírez Hernández
Aiza no hividianana ny boky Didactic Strategies ho loharanom-pampianarana momba ny siansa voajanahary? Inona no dikan'ny boky Didactic Strategies ho loharanom-pampianarana momba ny siansa voajanahary? Ity asa ity dia vokatry ny fizotry ny fikarohana momba ny diplaoma momba ny siansa voajanahary sy ny fanabeazana momba ny tontolo iainana ao amin'ny Oniversiten'i Córdoba-Colombia, izay manandratra ny… hamaky bebe kokoa
Jolay 1, 2021 ny Julio Ernesto Valdez Cárdenas / Raúl A Roca Ochoa
Aiza no hividianana ny boky Ñaupa Ñan nosoratan'i Julio Ernesto Valdez Cárdenas/Raúl A Roca OchoaIBD? Inona no atao hoe boky Ñaupa Ñan? Ity boky ity, amin'ny arkeolojia Andean, dia miresaka momba ny lalana talohan'ny Hispanika izay mamakivaky ny Lohasahan'i Ayacucho, manomboka amin'ny tanàna tranainy Wari, mianavaratra, mankany amin'ny faritra ambany amin'ny Lohasahan'i Huanta,... hamaky bebe kokoa
Fomba fiasa amin'ny hevitra momba ny fandaharam-pianarana
Jolay 1, 2021 ny Maria Regina Zaudi
Aiza no hividianana ny boky Approaches to the Notion of Curriculum nosoratan'i María Regina ZaudiIBD? Inona no dikan'ny boky Approaches to the Notion of Curriculum? Amin'ny alalan'ity boky ity dia mikasa ny hiresaka amin'ny sokajy sasany amin'ny famakafakana ny sarintany ny hevitry ny fandaharam-pianarana. Tsiahivina fa ao amin’ny Siansa sosialy ny fananganana foto-kevitra dia manana… hamaky bebe kokoa
Fahalalana amin'ny fanabeazana lavitra
Jolay 1, 2021 ny Vanya Ben
Aiza no hividianana ny boky Fahalalana amin'ny fanabeazana lavitra an'i Vania BenIBD? Momba ny inona ilay boky Fahalalana momba ny Fampianarana Distance? Niteraka fiovana teo amin'ny fiainana sy ny fahalalan'ny fiaraha-monina ny fivoarana haingana ny siansa sy ny teknolojia ho hery mamokatra voalohany. Manery ireo orinasa… hamaky bebe kokoa
pejy1 pejy2 ... pejy65 manaraka →